desanbenz : Rip Steve Jobs...
उनको निधन सँगै, संसारभरि उनकै चर्चा भइरहेको छ । एप्पल डटकम (Apple.com) को पहिलो पृष्ठमा स्टिभ जब्स को तस्विर राखिएको छ । स्टिभ जब्स सँग को सम्झना, विचार या समवेदना प्रकट गर्नेहरुका लागि एप्पल लेrememberingsteve@apple.com मा ईमेल गर्न आग्रह गरेको छ ।
ट्वीटरमा विश्वव्यापी रुपमा ट्रेन्डिङ टपिक मा देखिरहेका स्टिभ जब्सलाई गुगल ले आफ्नो होमपेज (Steve Jobs, 1955-2011) मा सम्झना गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति वाराक ओवामा (Rest in Peace, Steve Jobs. From all of us at #Obama2012, thank you for the work you make possible everyday – including ours. The World has lostaVisionary. ~ President Barack Obama), माइक्रोसफ्ट का भूतपुर्व कार्यकारी बिल गेट्स (For those lucky enough to get to work with Steve, its been an insanely great honor. I will miss Steve Immensely. ~ Bill Gates), फेसबुक का कार्यकारी प्रमुख मार्क जकरवर्ग (Steve, thank you for beingamentor andafriend. Thanks for showing that what you build can change the world. I will miss you. ~ Mark Zuckerberg onFacebook), गुगलका प्रमुख कार्यकारी ल्यारी पेज तथा सहसंस्थापक सेरगी व्रिन (Passion for excellence is felt by anyone who has ever touched an Apple Product ~ Sergey Brin on Google Plus. Focus on the user experience above all else has always been an inspiration to me. ~ Larry Page on Google Plus) लगायतका व्यक्तिहरुले उनको काम को प्रशंसा र सम्झना गरेकाछन् र जब्सलाई गुमाउनु पर्दा दुख लागेको कुरा व्यक्त गरेकाछन् । गुगल का संस्थापक व्दय ल्यारी पेज र सेरगी व्रिन ले विगतमा ‘स्टिभ जब्स’लाई गुगल को प्रमुख कार्यकारी मा नियुक्त गर्ने प्रयास गरेका थिए !